Yintoni esinokuyifunda ekuqaleni komyili uJessica Walsh | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Siza kunikezela indawo namhlanje ukuba siphicothe kancinane malunga nokwaziwayo Umzobi wegraphic uJessica Walsh kunye nendlela awathabathe ngayo amanyathelo akhe okuqala kwihlabathi lobugcisa bemizobo, de wazenzela igama, uphawu, isitayile sakhe esimzuzele iwonga lokuba "ngumntwana ophikisayo".
Uqale njani amanyathelo akhe uJessica Walsh?
Wayesandula ukugqiba isidanga sakhe kwi-RISD yodumo, wayesele enezithembiso ezimbini eziqinisekileyo zokuphucula umsebenzi wakhe wokuyila, enye kwi iapile njengomqeshwa oqeshwe ukuba abe ngumyili wemizobo kunye nenye kwi IPentagram ukwenza umsebenzi njengomfundi kunye noPaula Scher.
Isigqibo sakhe, sokuba amkele imisebenzi ebonakalayo ayinikwe yiPentagram, isiqalo esihle sikaJessica Walsh, ungatsho.
Kutshanje ndiye ndachaza isizathu sesigqibo sakhe, Ndiyabonisa ukuba kwikamva lakhe uzibone eyintloko yesifundo sokuyila kwakhe Kwaye ngenxa yale nto kwafuneka afunde yonke into ayifumanayo kwaye akukho nto ilunge ngakumbi kunokwenza ngesandla sokufunda esihloniphekileyo; Ngesi sizathu, iPentagram yayiyeyona ndlela anokukhetha kuyo ukuphucula ubume beBranding.
Ngexesha lakhe njengomfundi, ndisebenzisana kakhulu kunye Paula scher ukumenzela iiprojekthi ezizimeleyo kwaye kuye kwamkhulisa uphuhliso lobungcali, kangangokuba kungabikho thuba lokuqesha, uScher wamcebisa ngesithuba Shicilela iMagazini njengomlawuli wobugcisa onxulumene naye.
UJessica Walsh uyathandabuza ukuba angasamkela na esi sipho, kodwa kuba kwakungekho ndawo imiselweyo ePentagram, wavuma ukuya kuPrinta, oku kwenzeka ngo-2008 kwaye waphinda wenza isigqibo esifanelekileyo okoko imagazini ngelo xesha yayisebenza nohlahlo-lwabiwo mali olungqingqwa. kwaye kwaba njalo ithuba lophuhliso kuye, osebenzisa ulwazi lwakhe lokufota, umzekeliso kunye noyilo lokuseta ukwenza wonke umsebenzi ngaphandle kokuqesha abantu besithathu, okuthe kwaba negalelo elikhulu kwintyatyambo yesimbo sakhe.
Wayephethe uninzi ikhava iiprojekthi zoyilo, apho ndisebenza khona kugxininiswa ekuveliseni izinto ezintsha kangangoko kunokwenzeka, ukufezekisa iziphumo ezingalibalekiyo kwicandelo loyilo.
Kuba uPrinta ukwazile ukuwuphuhlisa ngokupheleleyo umsebenzi wakhe kwaye waziwa ngezi zinto, ulichaza eli xesha njenge “ixesha elinomdla”Apho imisebenzi imana khona kuye kunye nezivumelwano ezinkulu.
Le yindlela azenzele ngayo igama kweli shishini UJessica Walsh, kodwa kwafika ixesha apho oko kwakungonelanga. Uhlobo lwe umfanekiso wemibala emibalabala ukuba sele ephethe kwaye uchongile, okwamkhokelela ekubeni atshintshe ikhosi kwaye afudukele kwisicwangciso sobuchule kunye noyilo lokuchonga.
Nalu uphononongo olufutshane lokuba yayiziphi iziqalo zikaJessica Walsh eziphawule ukuba yintoni namhlanje amandla akhe okudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni esinokuyifunda kwisiqalo somqambi uJessica Walsh?